Maro ny mpikaroka toa hihazona fomba fijery mifanohitra ny IRB. Amin'ny lafiny iray, dia mihevitra ny IRB mba ho bumbling-birao. Na izany aza, tamin'izany andro izany, izy ireo ihany koa ny mihevitra ny IRB mba ho ny farany mpizara ny etika fanapahan-kevitra. Izany hoe, izy ireo toa mino fa raha ny IRB ankasitrahany izany, dia tsy maintsy ho OK. Raha manaiky ny tena tena fetra ny IRBs rehefa misy amin'izao fotoana izao, ary misy maro amin'izy ireo (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -then isika, toy ny mpikaroka dia tsy maintsy handray fanampiny andraikitra ny etika ny fikarohana. Ny IRB dia tany tsy misy valin-drihana, ary izany hevitra manana fiantraikany lehibe roa.
Voalohany, ny IRB dia gorodona dia midika fa raha miasa ao amin'ny rafitra iray izay mitaky IRB famerenana, dia tokony hanaraka ireo fitsipika. Mety toa mazava, fa efa nahatsikaritra aho fa misy olona toa te-tsy ny IRB. Raha ny marina, raha toa ianao ka miasa ao amin'ny faritra mitebiteby-pahamendrehana, ny IRB afaka ny ho mpiara-mahery. Raha manaraka ny lalàna, dia tokony hijoro any aoriana any dia tokony zavatra tsy mety amin'ny fikarohana (King and Sands 2015) . Ary, raha tsy manaraka ny fitsipika, afaka mahita ianao dia avy amin'ny ny amin'ny toe-javatra tena sarotra.
Faharoa, ny IRB tsy valindrihana dia midika fa mameno avy fotsiny ny teny sy ny fanarahana ny fitsipika ao tsy ampy. Amin'ny toe-javatra maro ianao toy ny mpikaroka dia ny olona izay mahalala ny tena hanao zavatra momba ny fomba-pahamendrehana. Tamin 'ny farany, ianao ny mpikaroka sy ny etika andraikitra lainga aminareo; dia ny anaranao eo amin'ny taratasy.
Ny fomba iray mba hahazoana antoka fa hitondra ny IRB toy ny gorodona, ary tsy ho valin-drihana dia ny ahitana ny etika fanazavana fanampiny ao amin'ny antontan-taratasy. Raha ny marina, afaka handrafitra ny etika fanazavana fanampiny eo anoloan'ny manomboka mianatra mihitsy aza mba hanery ny tenanao mba mieritreritra momba ny fomba no manazava ny asa ny namanao sy ny vahoaka. Raha tsapanao fa mitady tsy mahazo aina raha manoratra ny fanazavana fanampiny, dia ny fianarana mba tsy hamely ny mety etika mandanjalanja. Ankoatra ny hanampy anao hamantarana ny asany, famoahana ny etika appendices dia hanampy ny fikarohana fiaraha-monina miresaka momba ny olana etika ary hanorina mety fitsipika mifototra amin'ny ohatra avy amin'ny tena empirical fikarohana. Table 6.3 empirical fikarohana ankehitriny taratasy izay Heveriko fa tsara resaka ny fikarohana fitsipika. Tsy miombon-kevitra amin'ny rehetra milaza ny mpanoratra ao amin'ny adihevitra ireo, fa izy ireo ohatra ny mpikaroka rehetra, manao amin'ny tsy fivadihana amin'ny heviny voafaritry ny Carter (1996) : isaky ny tranga, ny mpikaroka (1) manapa-kevitra izay mihevitra ny tsara sy ny ratsy; (2) ireo zavatra mifototra amin'ny zavatra efa nanapa-kevitra, na dia manokana vola; ary (3) izy ireo mampiseho ampahibemaso fa manao zavatra mifanaraka amin'ny etika ny fanadihadiana ny zava-misy.
Table 6.3: Papers amin'ny resaka mahaliana ny etikan'ny ny fikarohana.
Rijt et al. (2014) tsy misy fanekena an-tsaha fanandramana
fialana contextual ratsy
Paluck and Green (2009) an-tsaha fanandramana in dalam firenena
fikarohana momba mora lohahevitra
sarotra fanekena olana
remediation ny mety hanimba
mahay mampifandanja loza sy ny soa, rehefa loza dia sarotra ho refesina
Chaabane et al. (2014) fiaraha-monina vokatry ny fikarohana
fampiasana angon-drakitra nitete raki-daza
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) tsy misy fanekena an-tsaha fanandramana
Soeller et al. (2016) nandika teny ny fanompoana